लोकसेवा विज्ञापन: सरकार पछि हट्ला कि समिति ? अब के हुन्छ ? – Jaljala Online
जेष्ठ २७, काठमाडौँ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि मागेको कर्मचारी अवश्यकतासम्बन्धी विज्ञापनबारे छलफल गर्न तीनपटक बोलाउँदा पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित बैठकमा नआएपछि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले शुक्रबार तयार गरेको निर्देशनको ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्न रोकिएको छ ।
यो खबर ऋषिराम पौड्यालले कान्तिपुर दैनिकमा लेखेका छन् । मन्त्रीलाई अन्तिम मौका दिने भन्दै समितिले सोमबार बिहान पुनः बैठक बोलाएको छ । एकातिर अधिकांश सांसद विज्ञापन रद्द गर्नेमा एकमत देखिन्छन् भने अर्कातिर मन्त्री पण्डितले मानेनन् भने त्यसको विकल्प के हुने भन्ने अन्योल छ । यसको निकास धेरै सजिलो नरहेको स्रोतको भनाइ छ । निकास पाउन सरकार र समितिमध्ये एउटा पक्ष पछि हट्नैपर्छ । मन्त्रीलाई बोल्न दिनुपर्ने अडान राख्दै आएका सत्तारूढ पार्टीका सांसद नवराज सिलवाल र विजय सुब्बाले आफूहरू ड्राफ्टमा उल्लिखित ‘कन्टेन्ट’ प्रति सहमत रहेको बताएका छन् । मन्त्री पण्डितको कुरा सुनेर मात्र निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने उनीहरूको अडान हो । सिलवालले समिति बैठकमा पटकपटक भनेका छन्, ‘कन्टेन्ट’ मा विमति छैन ।’
असार ४, काठमाडौं । केही वर्षअघि ललितपुर, लुभुमा एउटा दर्दनाक घटना भएको थियो। यो खबर अनुषा अधिकारीले सेतोपाटी अनलाइनमा लेखेकी छन् । तस्बीर: सेतोपाटी आमाले आफ्नो दुईमहिने बालकलाई काजु पिसेर खान दिइन्। राम्ररी नपिसिएको काजुको सानो टुक्रा शिशुको घाँटीमा अड्कियो। शिशुले ज्यान गुमाउनुपर्यो। यो दुखद खबरबारे पत्रपत्रिकामा समाचार आयो। धेरै मान्छे आफ्नो बालबच्चाको खानपिनलाई लिएर […]
Posted on August 24, 2019 Author Jaljala Online
यो लेख लक्ष्मी खनालले सेतोपाटीमा लेखेकी छन् । मीना ढकाल, उनको उमेर सायद ४५ को हाराहारीको हुँदो हो। तर उनको चुरीफुरी १६ वर्षे युवतीको भन्दा कम छैन। रमाइलो गर्ने उमेरले होइन, मनले हो, चाहनाले हो, रहरले हो भन्ने गतिलो उदाहरण हुन् उनी। सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा उनका १२ हजारभन्दा बढी फलोअर छन् भने उनले बनाएका प्रत्येक […]